लक्ष्मी लघुवित्तको खुद मुनाफा कति ? « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
लक्ष्मी लघुवित्तको खुद मुनाफा कति ?
१ श्रावण २०७४, आईतवार ०९:०३
काठमाडौ, १ साउन । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा खुद मुनाफा ७२ दशमलव ५८ प्रतिशतले वृद्धि गरी १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले जम्मा ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो ।
२२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको लक्ष्मी लघुवित्तले जगेडा कोषमा १६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राखेको छ भने निक्षेप ६६ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि गरी ६६ करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो ।
त्यस्तै कर्जामा ५८ दशमलव शून्य २ प्रतिशतले वृद्धि गरी २ अर्ब १८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । खुद ब्याज आम्दानीमा ६४ दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेर २४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ७३ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेर १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । लक्ष्मी लघुवित्तले प्रोभिजनमा १ करोड १५ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।
प्रकाशित : १ श्रावण २०७४, आईतवार ०९:०३